Netizen Report: Mivatravatra Ny Hetsipanoherana ao Etiopia, Ireo Bilaogera Zone9 Kosa Miverina Any Amin’ny Fitsaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2016 14:36 GMT
Arakaraky ny fivatravatran'ireo hetsipanoherana ny fanitsakitsahana zo amin'ny tany sy ny fanavakavahana ara-poko, toa toy ny resy an-tany fiadiana ireo bilaogera sy mpanao gazety tsy miankina ao Etiopia amin'ny adin'izy ireo ho fampanjakàna ny fahalalahana maneho hevitra. Mifanindran-dàlana amin'ireo fisamborana hafa tsy ela akory izay, mpikambana efatra amin'ny fikambanan'ireo bilaogera Zone9, izay nifonja 18 volana noho ny vesatra mifandray amin'ny resaka fampihorohoroana tamin'ny 2014-2015, no niverina niatrika fitsaràna ny 21 Oktobra, taorian'ny fampakàrana nataon'ny mpampanoa lalàna. Mbola nahemotra indray ny raharaha mahakasika azy ireo, ka napetraka ho daty vaovao hanaovana ny fitsaràna ny 15 Novambra.
Voampanga araka ny Fanambaràna ao Etiopia momba ny ady amin'ny fampihorohoroana, ho “nanentana ny vahoaka hikorontana tamin'ny alàlan'ny media sosialy” ary “fandraisana fanohanana avy aminà fanjakàna any ivelany,” in-38 ireo bilaogera no niatrika fitsaràna nanomboka ny Jolay 2014 hatramin'ny Oktobra 2015, ahemotra fotsiny izao isak'izay mihetsika noho ny fangatahan'ny mpampanoa lalàna, izay nangataka fotoana misimisy kokoa hanaovan'izy ireo ny fanadihadiana ny raharahan-dry zareo. Tsy nisy fanazavàna fa dia nafahana ny sasany tamin'ireo mpikambana, fotoana fohy talohan'ny hitsidihan'i Barack Obama ny firenena tamin'ny Jolay 2015. Ny ambiny “nafahana” tamin'ny Oktobra, na dia tsy nantsoina mihitsy hijoro ho vavolombelona teo anatrehan'ny mpitsara aza ry zareo. Ary ankehitriny, taona iray aty aoriana, ny efatra amin'ireo mpikambana ao amin'ilay vondrona—Abel Wabela, Atnaf Berahane, Natnael Feleke sy Befeqadu Hailu— miverina indray miatrika fitsaràna.
Miaraka amin'ny filazana ofisialy hoe “ao anaty fepetran'ny tany misahotaka” ny fanjakana, voabahana tsindraindray ireo tranonkalanà media sosialy, na voaràra tsy ho azo ampiasaina, ary matetitetika tapaka ny fifandraisana Aterineto amin'ny finday, tsapa ho tena zava-dehibe mihitsy ny filàna fampitàna vaovao ataon'ny media tsy miankina avy ao anatin'ny firenena — ary miha-tandindonin-doza hatrany.
Ny 16 Oktobra, andro fifidianana solombavambahoaka, voabahana tao Montenegro ny WhatsApp, Viber, sy ireo fampiasa hafa fandefasana hafatra. Nilaza ny Masoivoho miandraikitra ny Tolotra Paositra sy Fifandraisana Elektronika ao amin'ny firenena hoe niniana natao ilay fibahanana mba hanakanana ny olona tsy handray ‘torohay tsy niriana’, filazana ofisialy ny ‘spam’ izay mety koa ho ampiasaina amin'ireo hafatra ho an'ny daholobe alefa amin'ny anaran'ny kandidà iray manokana na ireo antoko politika.
Kiobàna bilaogera no sady mpanao gazety i Elaine Diaz, ary mpanoratra mandray anjara ihany koa ato amin'ny Global Voices, notànan'ny mpitandro filaminana Kiobàna niaraka tamin'ireo maro mpiaramiasa aminy raha nitatitra ny vokatry ny rivomahery Matthew tany amin'ny faritra atsinanan'ilay nosy. Notànana nandritra ny andro roa ireo mpanao gazety. Taorian'ny famotsorana azy ireo, nilaza ilay vondrona hoe fanampin'ny fakàna am-bavany azy ireo, niharan'ny fangiazana vonjimaika nataon'ireo manampahefana ny fitaovan-dry zareo, ny finday, ny fandraisana feo, ary fitaovana hafa fanangonana vaovao. Niharan'ny fisavana ny vatana manontolo ireo vehivavy tao anatin'ilay andiany.
Anatin'ny vaovao hafa avy ao Kiobà, hitan'ilay vondrona Dyn Research mpanara-maso ny tambajotra (mpampiantrano vaovao ny Renesys) fa misy mpamatsy iray vaovao, ny UTS avy ao Curaçao, toa miasa amin'ny ALBA-1 hosona mpitondra taratra any ambany ranomasina ao Kiobà. io no mety ho voalohany amin'ireo mpanome tolotra hiasa amin'ilay hosona, hatramin'ny nisiany tamin'ny 2013. Na dia andrasana aza ny fiantrakan'ilay fiovàna, mety hanatsara ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana ao Kiobà io, hahafahan'ireo mpampiasa mahazo ireo votoatin-tranonkala ampiantranoina ao amin'ny tampajotran'ny UTS, izay akaiky kokoa ny firenana raha miohatra amin'ireo tambajotra mamatsy amin'izao fotoana ilay nosy.
Nolavin'ny fitsaràna ao Etazonia ireo vesatra fanakorontanana napetraka tamin'ity herinandro ity hanenjehana an'i Amy Goodman, mpanao gazety miasa aminà fampielezampeo. Rava tanteraka ireo vesatra ireo sy ny hafa nanenjehana an-dramatoa Goodman, taorian'ny nandraketany sy nizaràny lahatsary (tamin'ny alàlan'ny famoahana vaovaon'ny Democracy Now!) tety anaty aterineto tamin'ilay hetsipanoherana nisy ny 3 Septambra nanoherana ny fanorenana fantsona iray goavana be fitaterana solika ao amin'ny fanjakàna Dakotà Avaratra. Ilay lahatsary, vetivety dia niely be, dia nampiseho orinasa tsy miankina iray misahana ny fiambenana nampiasa fitsifotra dipoavatra no sady namela alika hamely ireo mpanao hetsipanoherana. Mety hamakivaky ny toeram-pandevenanan'ireo Indiana Amerikàna sy mety hiteraka fahavoazana tsy hay tononina amin'ny tontolo iainana ao amin'ny Renirano Missouri, loharano fototra ho an'ilay faritra, ilay fantsona fitaterana solika fototry ny fifanolànana. Safidin'ny fitantanan'i Obama ny hampiato ilay tetikasa fantsona goavana fitaterana solika, andro maro taty aoriana.
Nangataka ireo mpanjifany ireo orinasa Thai mpanome tolotra fifandraisandavitra amin'ny finday mba hitatitra izay “votoaty tsy mendrika momba ireo andrim-panjakan'ny mpanjaka” taorian'ny nahafatesan'ny Mpanjaka Bhumibol Adulyadej. Mitatitra ny Reuters hoe telo izao ireo mpanome tolotra ao an-toerana no manome toromarika ny mpampiasa azy momba izay fomba fanaovana tatitra ireo lahatsoratra Facebook na Youtube, mifanaraka amin'ny fangatahana iray avy amin'ny Kaomisionan'ny Fifandraisandavitra sy ny Fampielezampeo ao amin'ny firenena. Manana lalàna henjana i Thailand manenjika ireo maniratsira ny mpanjaka, izay efa nampiasaina fahiny mba hanakatonana media sy handefasana ireo bilaogera sy mpampiasa media sosialy ho any am-ponja.
Maherin'ny ampolony ireo Rosiana mpanao gazety sy mpikatroka mafàna fo no naharay fampitandremana hafahafa avy amin'ny Google tamin'iny herinandro iny, nampilaza azy ireo hoe mety “manandrana mangalatra” ny tenimiafiny ireo “mpanafika tohanan'ny governemanta”. Lazain'ilay orinasa fa “0.1 isanjato raha kely indrindra amin'ireo mpampiasa Gmail” no niharan'izany. Sehatra telo no notafihan'ireo mpijirika, sehatra an'ny Transparency International, hatramin'ireo adiresy imailak'ireo mpitantana ao amin'ny biraom-paritra sy iraisam-pirenena.
Ny Biraon'ny Filaminam-bahoaka ao Shanghai dia nanakatona kaonty livestreaming efa ho manodidina ny 1.000 ary mitaky amin'ny tompon'ireo kaonty 450.000 hafa hanome porofo momba azy any amin'ilay Birao.
Ny Sampandraharaha miahy ny Tontolon'ny Aterineto ao Shina dia namolavola ihany koa andianà fepetra vaovao ho Fiarovana ny Tsy Ampy Taona ety anaty Aterineto sy nametraka azy ireny ho azon'ny daholobe anehoana hevitra alohan'ny 31 Oktobra 2016. Ireo fepetra ireo dia hanome endrika tsy maintsy arahana ho an'ireo rindrambaiko tsy voafaritra ka napetraka alohan'ny famarotana solosaina ho an'ny tsirairay, ikendrena ny hanakanana ny tsy ampy taona tsy ho afaka hiditra amin'ireo “torohay tsy ara-dalàna sy tsy mendrika” araka ny famaritan'ny lalàna Shinoa azy. Omeny alàlana ihany koa ireo rindrambaiko mikendry ny hiady amin'ny “fiankinandoha amin'ny aterineto”, fepetra iray izay niteraka fahaketrahana tao amin'ny media sosialy teny anivon'ireo olona velon'ahiahy momba ilay “fomba fiatrehana” olana tena feno famaizana tafahoatra.
Nandray anjara tamin'ity taitra ity i Ellery Roberts Biddle, Oiwan Lam, Weiping Li, sy Sarah Myers West